Fampidirana rindrambaiko fitantanana vakansy | Zeevou Integrations
Zeevou dia miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka isan-karazany hahafahanao mandeha ho azy ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny rehetra manomboka amin'ny vidiny, amin'ny fitsirihana mpitsidika, amin'ny fifandraisana sy ny fitantanana kaonty.
Vonona ny hampivelatra fampifangaroana amin'i Zeevou amin'ny alàlan'ny OpenAPI anay?
Ampifandraiso amin'ny fampiharana sy rindrambaiko safidinao amin'ny alàlan'ny Zapier i Zeevou.
Tantano ny asa fanadiovana ny fanananao trano fialan-tsasatra, mitadiava mpanadio eo an-toerana ary mifandraisa mora foana amin'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny TurnoverBnB.
Ampifandraiso amin'ny Profile Google ny Zeevou's Propiles, ampio manokana ny fifandraisana aminao, ary afeno ny mpitsidika anao hamandrika mivantana.
Atsofohy ao amin'ny HubSpot ny angon-tsain'ireo vahininao, mamorona CRM mifanaraka amin'ny GDPR amin'ireo olona ifandraisanao, manara-maso ny varotra sy ny fampielezana varotra ary mandefasa mailaka.
Ampifandraiso amin'ny Mailchimp ny mombamomba ny mpitsidika anao Zeevou, manaova fampielezankevitra mailaka matetika na alàlan'ny mandeha ho azy ary mahazo famandrihana mivantana bebe kokoa.
Ampidiro ny tranonkalanao Wix amin'ny motera famandrihan'i Zeevou amin'ny tsindry vitsivitsy, ary mahazoa famandrihana mivantana bebe kokoa.
Vohay ny varavarana vaovao hifandraisana tsy misy fetra amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo na dia tsy tafiditra amina rindrambaiko manokana aza i Zeevou fa i Zapier kosa.
Ataovy mandeha ho azy ny lafiny maro amin'ny orinasanao mandray vahiny ary mizara angona avy ao anatin'ny Zeevou miaraka amin'ny OpenAPI anay.
Alefaso ao amin'ny Google Search Console ny sitemap noforonin'i Zeevou mba handrefesana ny fivezivezena sy ny fahombiazan'ny tranokalan'ny famandrihana Zeevou anao ary hamahana ireo olana.
Ampiasao ny iFrame an'i Zeevou ary ampidiro ao amin'ny pejin-tranonkalanao Wix na tranokala ankolafy hafa mety efa napetrakao ny Widget fikarohana anay.
Ampifandraiso amin'ny Engine Booking an'i Zeevou ny tranokalanao WordPress ary alaivo tsy miangatra ny vahininao amin'ny pejy valin'ny fikarohana an'i Zeevou na dia tsy tsikaritr'izy ireo aza.
Adikao ary apetaho kaody fanarahana GTM ao amin'ny Zeevou, araho ny zava-bitan'ny tranonkalanao famandrihana Zeevou mivantana, ary zahao raha misy pejy sy hetsika miova na tsia.
Ampidiro mora foana amin'ny Google Analytics ny tranonkalanao famandrihana Zeevou, ary mahazoa hevi-baovao momba ny zava-bitan'ny tranokalanao ary jereo izay mila fanatsarana.
Ny fampidirana Zeevou sy Elavon dia manampy amin'ny fanodinana fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka 3-D, alalana alalana mialoha ary hamotsorana any Zeevou.
Mandraisa tombony amin'ny mpanome serivisy fanodinana fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fanodinana ny fandoavam-bola, ny famerenam-bola ary ny fiarovana alohan'ny fametrahana alalana ary famotsorana.
Raiso ary alamino ny fandoavam-bola amin'ny Internet. Ny fampidirana an'i Zeevou miaraka amin'ny PayPal dia manampy amin'ny fanangonana ny fandoavam-bola sy ny fanodinana famerenam-bola ao Zeevou.
Ampiasao ny fampidirana Zeevou sy ClickSend hametrahana automatique ny serasera amin'ireo vahininao, mandefa SMS amin'ny marketing sy bebe kokoa hatrany amin'ny telefaona findainy.
Ny fampidiran'i Zeevou amin'i Opayo avy amin'i Elavon dia ahafahanao manodina ny fandoavam-bola sy ny famerenam-bola, ary koa ny fametrahana fiarovana amin'ny alàlan'ny rohy 3-D.
Ampifandraiso mora foana i Worldpay miaraka amin'i Zeevou, ary raiso sy alaharo ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny rohy 3-D, alao automatique mialoha ny fanomezana alalana ary hamotsorana ny fiarovana.
Mampiasà tolo-kevitra momba ny vidin'ny data mifototra amin'ny vanim-potoana, andro amin'ny herinandro, fotoana fitarihana ary ny fangatahana eo an-toerana hanatsarana ny taha azonao ary amin'izany fidiram-bola.
Ampiasao ny angon-drakitra an-tsena tena izy hanatsarana ny taha azonao miorina amin'ny tolo-kevitra momba ny vidiny ary hampitomboana ny vola miditra sy ny fivezivezena ao amin'ny lisitrao.
Ny fampidirana an'i Zeevou miaraka amin'i Stripe dia manolotra rohy 3-D ho an'ny fandoavam-bola hisorohana ny hosoka, hampandeha mialoha ny fanomezan-dàlana fiarovana ary hamerenana ny volany.
Ataovy mandeha automatique ny fitahirizam-bokinao hitehirizana ny fotoana sy ny vidinao. Zeevou dia afaka manafatra ny tabilao misy ny kaonty, ny schema haba ary ny sokajy fanarahana.
Ny fampidirana amina fampiharana isan-karazany dia iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny rindrambaiko rehetra. Tsy mainka ve izany ho an'izay manandrana ho ivon'ny asa rehetra ataonao amin'ny maha-tompona orinasa mandray vahiny anao! Izany no antony ho anay dia ny fampidirana no laharam-pahamehana indrindra. Miasa hatrany izahay fampidirana miaraka amin'ny mpiara-miasa bebe kokoa.
Te-hiaraka amin'i Zeevou?
Ny fampidirana efa misy anay dia manarona mpamatsy maro isan-karazany. Anisan'ireny ny:
Fitaovana vidiny mavitrika toa ny Ankoatra ny vidiny ary PriceLabs. Ireo dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny Airbnb's Smart Pricing na HomeAway's MarketMaker.
Varavarana fanodinana vola sy mpanome serivisy mpivarotra toy ny PayPal, mivatra, SagePay, na Worldpay.
Azo zahana - rindrambaiko fanaovana sonia nomerika hahazoana fahazoana sonia mamatotra ara-dalàna avy amin'ny vahiny, ary koa fanangonana ID amin'ny fomba mifanaraka amin'ny GDPR.
KeyNest - serivisy fifanakalozana mandeha ho azy ho an'ny mpiasa sy ny vahiny.
Xero - fonosana fitehirizana boky sy fitantanana kaonty manerantany